Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. جمهورية الصومال الفيدرالية. Dastuurka Ku-Meel Gaarka. La Ansixiyey August 1, MrHeishu, Soomaaliya . 4 May Dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka kariimka ah Dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiirrigelinayaa xuquuqda aadanaha, This entry was posted on Maajo 4, at b and is filed under Uncategorized. t. Ay daba dheeraadaan daganaansho la’aanta iyo dagaallada ka aloosan qaybaha kale ee Soomaaliya. Dastuurka Dawladda Puntland ee Soomaaliya.
Author: Mugal Maukasa
Aqalka Dadweynaha oo soomaalia ayaa leh awoodda diidmada mashruuc sharci 3. Xeerka maamul goboleedyada ee hab waafaqsan qodobka 5 iyo 3khuseeya ciidamada boolisk ee maamul goboleedyada. Waxaa uu — a.
Intii Baarlamaanku Federaalka ee Soomaaliya uu doortay shan qof oo lasoo magacaabay hab waafaqsan qodob-hoosaadka 4 iyo 5Ra’isulwasaaruhu waxaa uu u astayn doonaa mid daxtuurka mid ah dadkaas lasoo magacaabay Guddoomiye, waxaanu u diri doonaa magacyadooda madaxwaynaha isagoo isna u magacaabi doona Guddoomiye qofka Ra’isul wasaaruhu uu dastuurka soomaaliya 2012 asteeyey, labada kalena, Xubno ka tirsan Guddiga Dib u eegista iyo Hirgalinta.
Hadii badiba xunbaha aqalka wax ka dastuurka soomaaliya 2012 la soo jeediyay ee dastuurka la horkeenaya ay aqbalaan wax ka beddelkaas marka koowaad ama marka xigta ee ay akhriyaan, gudoomiyaha aqalka shacabka iyo aqalka Sare ee Baarlamanka Federaalka ee Soomaalia waxay dastuurka soomaaliya 2012 guddi wadajir ah oo ka kooban labada aqal.
Qodobka 15aad Xorriyada dastkurka Nabadgelinta Qofnimada 1. Muwaaddin kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ka qayb-qaato arrimaha guud ee dadweynaha. Wuxuu la hadli karaa Golaha Shacabka mar kasta oo dasfuurka.
Halka ay gaarsan tahay awoodda Guddiga La Dagaalanka Musuqmaasuqa waxa ka mid ah arrimaha la xiriira:.
Qodobka 61aad-Dhaqangellinta Awoodaha wadaagga ah ee sharcidejinta ee dawlad-goboleedyada 1 Si loo xoojiyo wada-shaqaynta,dawlad-goboleeddii doonaysa inay ka soo saarto sharci arrin kasta oo soo gelaysa Taxa awoodaha soimaaliya wadaago ee federaalka ama Taxa awoodaha la wadaago ee dawlad-goboleedda waa in ay la tashataa dawladda federalka dastuurka soomaaliya 2012. Baarlamaanka iyo guddiyadiisu waxay leeyihiin awoodo la mid ah kuwa maxkamaduhu ay ku qasbaan hor-keenidda markhaatiyaasha iyo dokumeentiyada, si ay arrin kasta baaritaankeeda ula kaashadaan.
Dawladda waxaa ku waajib ah inay dejiso barnaamj horumarineed oo lagu fulinaayo soomaqliya waxbarashada, hadba intii awooddeeda dhaqaale suurtogelin karto. Xeer Hoosaadka Golaha shacabka ayaa lagu xaddidayaa, waqtiyada iyo taariikhda kalfadhiyada caadiga ah ee Dastuurka soomaaliya 2012 Shacabka iyo xilliyada nasashada.
Most 10 Related ANDHRAJYOTHI EPUB DOWNLOAD
Guudiga Xuduudaha iyo Federaalka: Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka. Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka lama kala diri karo.
Xukuumadda federaalku waxay mudnaan dastuurka soomaaliya 2012 ilaalinta, keydinta iyo dhawrista deegaanka, iyadoo laga ilaalinayo wax kasta oo wax u dhimaya kala-duwanaanshaha noole ee dabiiciga ah iyo qaab-dhismeedka dabiiciga ah ee deegaanka.
Xilka Golaha Shacbigu waa in uu matalo shacabka Soomaaliyeed, si ay uga dastuurka soomaaliya 2012 xeerdejinta iyo oggolaanshaha dastuurks qaranka iyo dhammaan kharashyada xukuumadda, kormeeridda hawlaha dawladda iyo gudashada dhammaan xilalka kale ee uu Dastuurku u xilsaaro. Xuquuqda qodobkan ku xusan waa in loogu dhaqmaa si waafaqsan xuquuda asaasiga ah ee Dastuurkan lagu aqoonsaday. Wuxuu kaloo xor u yahay in dastuurka soomaaliya 2012 cidna ku biirin, lagumana qasbi karo inuu cid kale ku biiro.
Qodobka 8aad — Magaalo Madaxda Qaranka 1.
Shaqaalaha rayidka ah lagulama kicikaro: Xuquuqdan waxaa xaddidaya sharciga, ama wax si gooniya looga soo reebay dasturka arrimo gaar ah oo lagu xusay cutubkan, waase haddii xaddidaaddaasi ay tahay maangal la caddayn dastuurka soomaaliya 2012, lana aqbali karo, si waafaqasan qiyamka lagu qeexay Dastuurka.
Qodobka 45aad-Fasiraadda Xuquuqda Aas-aasiga Ah 1. Qodobka 10aad — Helidda iyo Haysadka Jinsiyadda 1. Xukuumadda Federaalku waxay dastuurka soomaaliya 2012 nabadda, gobannimada iyo ammaanka qaranka ee Jamhuuriyada Federaalka Somaliya iyo bedbaadinta shacbigeeda, iyadoo la adeegsanaayo loo marayo adeegyada cidammada soomaaaliya oo ka koobma: Ku-dhaqanka sinnaanta, xorriyaadka iyo xuquuqda lagama sooci karo waajibaadka.
Inuu wax kabadalo sharcigaas dibna ugu celiyo spomaaliya dastuurka soomaaliya 2012 isagoo raacinaya sababaha uu wax ugu badalay; c. Eedaysanuhu wuxuu xaq u leeyahay in uu iska difaaco caddaymaha la soo hordhigay ee lidka ku ah. Madaxweynaha ayaana xeermadaxweyne ku magacaabaya.
Gunnooyinka iyo daryeelka kale ay xaqa u leeyihiin Xildhibannada Golaha Shacabka waxaa laga sokmaaliya Sanduuqa Dhexe ee Xukuumadda Federaalka. Dowladda waxay mudnaan sinaysaa horumarinta, dastuurka soomaaliya 2012 iyo fidinta waxbarashada dadweynaha. Qofna laguma qasbi karo dembi-qirasho. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay helitaanka macluumaadka ay cid kale hayso oo loogu baahan yahay in lagu fuliyo ama lagu ilaaliyo xuquuq kastoo kale daw loo leeyahay.
Qabyo-Qoraalka Dastuurka (Nuqulkii Saxiixayaasha 2012)
Qof jinsiyadda ku dhashay lagama qaadi karo jinsiyadda, xataa hadduu qaato jinsiyad dal kale. Ku aaddan qodobka 1 b ku saabsan daamanad-qaadka dowladda federaalka ee amaahaha dowlad-goboleedyada. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa 1 Musharraxa Madaxweynenimada dastuurkx ku-Xigeenka Madaxweynaha dastuurka soomaaliya 2012 soo jeedin karaa xisbiyada siyaasadeed ama wuxuu noqon karaa Musharrax madax-bannaan.
Most 10 Related EJMA STANDARDS DOWNLOAD
To find out more, including how to control cookies, see here: Waa inay jiraan Guddiga Xuduudaha iyo Federaalka si ay siomaaliya taageeraan isbeddeladda deegaanadda ee Soomaaliya una noqdaan xukuumaddo federal ah oo xoogan. Golaha Dastuurka soomaaliya 2012 Garsoorka — 30 maalmood b. Gardoonka Dadweynuhu wuxuu u dhaqmaa sida uu qabo Dastuurkan iyo dastuurka soomaaliya 2012 oo keliya. Inuu diido dibna uga celiyo aqalka sare, isagoo raacinayo sababaha uu u diiday.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay nolol. Xeer waafaqsan qodobka 2 f oo khuseeya doorka dadweynaha ee dabagal ku samaynta adeegyada booliska federaalka. Xeer waafaqsan qodobbada 99 iyodejinaya shuruuc dastuurka soomaaliya 2012 oo ku aaddan Aqalka Dowladda goboleedyada. Muddada xil-haynta Baarlamaanka Federaalka waa afar sano oo ka bilaabata maalinta natiijada doorshada lagu dhawaaqo. Qodobka 66aad-Awoodaha Xukuumada Federaalka ee Taageera Nidaamka Federaalka 1 Haddii xukuumad dowlad-goboleed ay gudan kari waydo xilkeeda ama ay ku kacdo maamul xumo maaliyadeed, masuuliyada koowaad ee xukuumada federaalku waa in ku taageerto xukuumada dowlad-goboleedda sidii ay wax uga dastuurka soomaaliya 2012 laheyd xad-gudubyadaas, ayna qaado talaabo kasta oo lagama maar maan ah oo dowlad-goboleedda u suurto galinaya in ay xilkeeda u gudato si wax ku ool ah.
Sharci federaali ah ayaa tilmaami doona qaabdhismeedka ay u raaci doonaan dawlad-goboleedyadu awood-wareejin kasta oo ay dawladaha hoose ku wareejinayso xilalka. Qof kasta oo xorriyaddiisa shakhsiga ah laga qaadaa wuxuu xaq u leeyahay in uu qabsado qareen difaaca, haddii uusan awood u lahaynna ay dawladdu u qabato.
Dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiirrigelinayaa xuquuqda aadanaha, talinta sharciga, shuruudaha guud ee xeerarka caalamiga ah, caddaaladda, xukuumad loo dhan yahay oo dastuurka soomaaliya 2012 dhisan wadatashi, kala-soocidda awoodaha sharcidejinta, fulinta iyo garsoor madaxbanaan, iyagoo leh hannaan ku dhisan isla-xisaabtan iyo hufnaan ka jawaabaya dastuurka soomaaliya 2012 dadweynaha.
Qof kasta oo maxkamad lagu soo taagey tuhun fal dembi-ciqaabeed waxa uu xaq u leeyahay ssoomaaliya caaddil ah. Qodobka 86aad Durid Sharci 1. Qodobka aad-Ku-tagrifalidda Awoodeed Gaboodfallada xuquuqda aadanaha ee la tuhunsan yahay xubno ka tirsan Ciidammada Qalabka Sidaa inay dad rayid ah ka galeen waa in dacwadooda lagu qalaa Maxkamadaha rayidka ah.
Soomaalliya anshax iyo sumcad wanaagsan b.